ဖေဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၀၄ (၂၀၀၄-၀၂-04)
၂၀၀၃ - ၂၀၀၅
၂၀၀၆ - ၂၀၁၁
၂၀၀၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်မှာတော့ မိုက်ခရိုဆော့ဟာ ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ ရှယ်ယာ ၁.၆% ကို ဒေါ်လာ သန်း၂၄၀ နှင့် ဝယ်ယူမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ရဲ့ ဝယ်ယူမှုတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြေငြာများနှင့် လူမှုကွန်ရက် ဝက်ဘ်ဆိုက် မူပိုင်ခွင့်ပါ ပါဝင်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသုံးပြုသူလူဦးရေများစွာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်တွင်ကုမ္ပဏီက သူတို့ဆီမှာ သုံးစွဲသူ သန်း ၅၀၀ ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြီးဆုံး လူမှုကွန်ရက်ကြီး တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ အသုံးပြုသူတစ်ဝက်လောက်ဟာ ဖေ့ဘုတ်ကို နေ့စဉ်သုံးစွဲပြီး တစ်ရက်ကို ၃၄ မိနစ်ခန့် သုံးစွဲကြကြောင်း၊ သန်း ၁၅၀ ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် သုံးစွဲကြကြောင်း သိရှိရသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟာ အဲ့ဒီသမိုင်းမှတ်တိုင်ကို "တိတ်ဆိတ်သော ပြောင်းလဲမှု" ဟု အမွှန်းတင် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာတွင်မူ Second Market Inc.၏ အချက်အလက်များအရ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကုမ္ပဏီတန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၄၁၀၀ ခန့်ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကုမ္ပဏီဟာ eBayကုမ္ပဏီကို ကျော်တက်ပြီး ဂူဂယ်နှင့် အမေဇုန်တို့ပြီးနောက် တတိယအကြီးဆုံး အမေရိကန် အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ - ၂၀၁၃
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို ပြောင်းလဲမှုအနေဖြင့် "Faebook Beta" အဖြစ် သုံးစွဲသူအချို့ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့် ပြုခဲ့သည်။ NewsFeed သည် ပိုမိုကြည့်ရှုရလွယ်သွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဟာ အုပ်စုများနှင့် ဖြစ်သွားသည်။ ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားတဲ့ ဒီဇိုင်းပါလို့ ပြောခဲ့ပါသည်။ စက်တင်ဘာလတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူအားလုံးကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲခွင့် ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူသော မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြုလုပ်နေကြောင်း ကြေညာသည်။
ရုံးချုပ် နှင့် ရုံးခွဲများ
facebook.com Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic။
Facebook Reports Third Quarter 2019 Results (in en-US)။
Facebook.com Traffic, Demographics and Competitors - Alexa။ February 4, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Clarke၊ Gavin (February 2, 2010)။ Facebook re-write takes PHP to an enterprise past။ Situation Publishing။ March 23, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Bridgwater၊ Adrian။ "Facebook Adopts D Language"၊ Dr Dobb's၊ October 16, 2013။
Levin၊ Sam (July 3, 2018)။ Is Facebookapublisher? In public it says no, but in court it says yes။
Carlson, Nicholas (2010). "At Last — The Full Story Of How Facebook Was Founded". Business Insider (online, March 5)'.
Phillips၊ Sarah။ A brief history of Facebook။ 2015-09-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Carlson၊ Nicholas။ "At Last – The Full Story Of How Facebook Was Founded"၊ Business Insider၊ March 5, 2010။
Michelle F. Davis (July 13, 2015)။ Facebook Close Sets Speed Record for $250 Billion Market Cap။ Bloomberg.com။
Tabak၊ Alan J.။ "Hundreds Register for New Facebook Website"၊ February 9, 2004။ November 7, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on April 3, 2005။
Facemash Creator Survives Ad Board | News | The Harvard Crimson။ 2015-09-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Company Timeline" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Facebook။ January 1, 2007။ March 5, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Rosmarin, Rachel။ "Open Facebook"၊ Forbes၊ September 11, 2006။ June 13, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Nguyen၊ Lananh။ "Online network created by Harvard students flourishes"၊ The Tufts Daily၊ April 12, 2004။ August 21, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 October 2013။
Williams, Chris။ "Facebook wins Manx battle for face-book.com"၊ The Register၊ October 1, 2007။ June 13, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။|
Facebook Testing Even Simpler Sign Up; Closing The Gap With MySpace In The U.S. – TechCrunch